Isbeddellada Macaamiisha Bulsheed ee Makhaayadaha 2012 | Martech Zone
Jimco, Nofeembar 30, 2012 Arbacada, Nofeembar 28, 2012 Douglas Karr
Waxaa jiray cadeymo badan oo ku saabsan saameynta mobilada ay ku leedahay isbeddelada dukaamada tafaariiqda caadiga ah, laakiin waa in sidoo kale la ogaadaa in dabeecadaha Macaamiisha Bulshada ee Mobilada (MoSoCo) ay saameyn weyn ku leeyihiin makhaayada iyo adeegyada hoteelada sidoo kale!
Barmaamijyada moobilada iyo kiniiniyada ayaa noqday wax soo saar la-qabsiga tikniyoolajiyaddan, layaabna ma leh in makhaayadaha, cuntada & martigelinta sumadaha ay ku qabsadaan adoo ku xiraya. Warbixintan Isbeddelka Macaamiisha Bulsheed ee Macaamiil ee ay kuu keeneen adiga DigitalCoCo iyo Tusmada Warbaahinta Bulshada ee Makhaayadda. waxaan eegi doonaa noocyada adeegsanaya muuqaalka cusub ee mobilka iyo bulshada kan ugu fiican ka-qaybgalka macaamiisha. Laga soo bilaabo Isbeddellada Macaamiisha Bulshada ee Wareegga ee 2012
Tags: geolocationhoteeladaadeegyada ku saleysan goobtamosocomakhaayadwarshadaha makhaayadda
3, 2012 at 2: 55 PM
Tani runti waa xog qiimo leh, mana ahan oo keliya warshadaha makhaayadaha. Waxaan dareemayaa inay ka hadlayso wax badan oo ku saabsan ganacsiyada yaryar, dadku waxay bilaabayaan inay xitaa ka sii firfircoon yihiin bulshada halka ay joogaan iyo waxa ay jecel yihiin iyo kuwa aan jeclayn. Natiijooyinka ugu horreeya ee raadinta 2 aniga ahaan waa waxa muhiimka u ah guddiga oo dhan: Goobta ka dibna Dib-u-eegista. Xog weyn oo loo hayo ganacsi kasta oo yar oo fiiro gaar ah loo yeesho.